‘ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအတွက် တစ်ခုခု မှားနေပြီဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့တာပါ’ ချယ်ရီ ဇာဟောင်
ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေက ချင်းအမျိုးသား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဟင်နရီ ဗန်ထီးယူကို ဒု-သမ္မတ တစ်ဦးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ အပေါ်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ရှိကြပါသလား။
ဘေးကင်းလုံခြုံ၍ အဟာရပြည့်ဝသော အစားအစာများ လုံလုံလောက်လောက် ထောက်ပံ့မှု မရှိခြင်းက ရေလွှမ်းမိုးခြင်းခံခဲ့ရသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျေးလက်လူထုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိနေသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီနှစ်ရပ်၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်
တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာပြန်စာပေ ခေတ်တစ်ခေတ် ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင်မူ ဘာသာစကားပိုင်း အားနည်းမှုနှင့် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် နည်းပါးမှုတို့ကြောင့် ဘာသာပြန် စာပေလောကမှာ ရုန်းကန်နေရဆဲ ဖြစ်သည် သီရိဟန် ရေးသားသည်။ မြန်မာစာပေလောကမှာ ဘာသာပြန်စာပေ တစ်ခေတ်ထွန်းတောက်ခဲ့တဲ့ ကာလများ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ဆရာကြီးမြသန်းတင့်၊ တက်တိုး၊ မောင်ပေါ်ထွန်းစသည့် စာရေးဆရာတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အချိန် ဖြစ်သည်ဟု စာပေလောကသားများ အပါအဝင် စာဖတ်ပရိသတ်များကပါ.
သမ္မတဦးထင်ကျော်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို တရုတ်နိုင်ငံက အလည်အပတ် ဖိတ်ခေါ်
သမ္မတဦးထင်ကျော်အား အီတလီနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ဝန်ကြီးများက သီးခြားစီ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်
တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များက ဥပဒေကြမ်းအား မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချိန်တွင် ထောက်ခံမဲ၊ ကန့်ကွက်မဲနှင့် ကြားနေမဲများ မပေးပဲနေခဲ့ကြ
ဦးဝင်းထိန်အား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကော်မရှင်တွင် တာဝန်ပေး
ကော်မရှင်၏ အဖွဲ့ဝင်လေးဦးမှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သွားကြသဖြင့် ကော်မရှင်မှ နှုတ်ထွက်သွားရပြီ ဖြစ်သည်။
ငွေလဲကောင်တာများက အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ္တဇဆန်စွာ ဇီဇာကြောင်နေကြခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကြောင်းအရင်းသုံးမျိုး ရှိသည့်အနက် တစ်ခုမှာ အခြားနှစ်ခုထက် ပိုမိုယုတ္တိ ရှိနေသည် ဂျော့ရှုဝါ ကားရိုးမှ ရေးသားတင်ပြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကျွန်တော်ရောက်ရှိခါစအချိန်က ကျွန်တော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေများ၏ အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သောကဖြစ်နေရသည့် အချိန်နာရီများစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ငွေကြေးလဲလှယ်သူများက ခရီးသွားများ.
အထူးကဏ္ဍ, တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း, စီးပွားရေး, ဆောင်းပါးကဏ္ဍ
“ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ခိုင်းတာလုပ်တဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ သမားရိုးကျ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ရခိုင်လူထုနဲ့ ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်”
လက်ရှိအစိုးရသစ်ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အာဏာခွဲဝေမှုတွေကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ငှက်ဖျား တိုက်ဖျက်မည့် ပိုးသတ်ဝတ်စုံ
ရာဘာခြံလုပ်သားများကို ပိုးသတ်ဆေးစိမ် အဝတ်အစားဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်းက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ငှက်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မည်ဟု ကျွမ်းကျင်ပညာများက မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။